ဤအချက်အလက်သည်သင်၏အချက်အလက်များကိုခိုးယူသွားသော WhatsApp လိမ်လည်မှုဖြစ်သည် Gadget သတင်း
ဤအချက်အလက်သည်သင်၏အချက်အလက်များကိုခိုးယူသွားမည့် WhatsApp လိမ်လည်မှုဖြစ်သည်
ငါ "WhatsApp လိမ်လည်မှု" နှင့် "Zara ကူပွန်များ" ကိုပြောခဲ့ရင်သင်ဟာdejavúခံစားနေရပြီး၎င်းသို့မဟုတ်အလားတူအရာတစ်ခုခုကိုသင်ကြုံတွေ့ပြီးပြီဟုသင်ထင်ကောင်းထင်လိမ့်မည်။ သို့သော်အမှန်တရားမှာဤကိစ္စသည်ရဲတပ်ဖွဲ့ကရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ခြင်းမဟုတ်ပါ လိမ်လည်မှုအသစ် ဒီအချက်နှစ်ချက်ကိုပေါင်းစပ်ပြီးသူတို့ရဲ့အချက်အလက်တွေကိုလွှဲပြောင်းယူဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အဝေးကိုမမျှော်လင့်ဘဲအာရုံစူးစိုက်မှုကိုအာရုံစိုက်ဖို့အတွက်။
၎င်းသည်ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ခြင်းမဟုတ်သလိုကံမကောင်းအကြောင်းမလှစွာလည်းဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ၊ ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်တိုတောင်းမည်မဟုတ်ကြောင်းကတိပြုထားသောဤတိုတောင်းသောစာမူကိုဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်ကျွန်ုပ်တို့အထူးအကြံပြုလိုပါသည်။ သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုဟက်ကာများမှရယူခြင်းကိုတားဆီးပါ.
Zara တွင်ကူပွန်ယူရို ၁၅၀ ကိုကတိပေးသော WhatsApp လိမ်လည်မှု
လူကြိုက်များ WhatsApp သည်၎င်းကိုဆိုက်ဘာရာဇ ၀ တ်သားများ၏အကြိုက်ဆုံးလမ်းကြောင်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည် ယင်း၏လိမ်လည်မှုများနှင့် malware ပျံ့နှံ့ဖို့။ သင်၏ရည်မှန်းချက်များအောင်မြင်ရန်အထိရောက်ဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုမှာသင်၏ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောသားကောင်များ၏အာရုံကိုဆွဲဆောင်ရန်ဖြစ်သည် လူသိများသောအမှတ်တံဆိပ်များမှလက်ဆောင်ကူပွန်အတု.
သင် Facebook တွင်ပျံ့နှံ့နေသည်ကိုသင်တွေ့ခဲ့ဖူးသောနောက်ဆုံးသောဤစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးများသည် Zara တွင်ယူရို ၁၅၀ အထိယူရန်သုံးစွဲသူများကိုအားပေးသည်။ သို့သော်၎င်းသည် LIE ဖြစ်သည်။ Zara သည်ဤပရိုမိုးရှင်းတွင်မပါ ၀ င်ပါ ၎င်းသည်အမျိုးသားရဲတပ်ဖွဲ့ကဲ့သို့လိမ်လည်မှုတစ်ခုဖြစ်သည် သတိပေး မိမိအတွစ်တာပရိုဖိုင်းကိုပေါ်မှာ။
အသစ်လိမ်လည်မှုတစ်ပါရှိပါတယ် သည်အခြားလိမ်လည်မှုဆင်တူစစ်ဆင်ရေး ချိတ်ဆက်မှုပါ ၀ င်သည့်မက်ဆေ့ခ်ျတစ်ခုကို (Facebook နှင့် WhatsApp တွင်) ရရှိပြီးနောက်သားကောင်သည်ဝက်ဘ်ဆိုက်အတုကို ၀ င် ရောက်၍ ရိုးရှင်းသောမေးခွန်းသုံးခုကိုမေးလိမ့်မည်။ နောက်ပိုင်းတွင်စနစ်သည်ကျွန်ုပ်၏ဖိတ်ကြားချက်ကိုအဆက်အသွယ် ၇ ခုသို့သို့မဟုတ် WhatsApp အုပ်စု ၃ ခုသို့ပေးပို့ခြင်းဖြင့်သင်သည်သင်၏ဆုကိုရနိုင်သည်။ သို့သော်၊ ရာဇ ၀ တ်သားများသည်သင်၏အချက်အလက်များကိုရယူလိမ့်မည်၊ သင့်စက်တွင် malware တပ်ဆင်ရန်ကြိုးစားမည်။
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကအလားတူလိမ်လည်မှုသည် Zara တွင်ယူရို ၅၀၀ အထိကူပွန်အတုများကိုကမ်းလှမ်းခဲ့သည်
ဒီအမျိုးအစား လိမ်ညာမှု သူတို့ဟာတကယ့်ဘုံတွေဖြစ်ပြီးတခြားကုန်အမှတ်တံဆိပ်တွေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုမသင့်တော်တဲ့သုံးစွဲမှုတွေလုပ်နေတယ်။ ထို့ကြောင့်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည် မယုံမည်သည့်လင့်ခ်ကိုမဆိုမနှိပ်မိနှင့်၊ သံသယဖြစ်ပါကထိုအမှတ်တံဆိပ်၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့သွားပါသို့မဟုတ်သင်အမှတ်တံဆိပ်အားသင်အမှန်တကယ်စတင်ခြင်းဟုတ်မဟုတ်စစ်ဆေးရန်လူမှုကွန်ယက်များမှတဆင့်ဤအမှတ်တံဆိပ်ကိုတောင်းခံပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ယေဘုယျ » NOTICIAS » ဤအချက်အလက်သည်သင်၏အချက်အလက်များကိုခိုးယူသွားမည့် WhatsApp လိမ်လည်မှုဖြစ်သည်
Sony RX10 IV သည်တံတားအသစ်ဖြစ်သောယူရို ၂၀၀၀ ဖြင့်ရောင်းချသည်
ဘယ်နိုင်ငံမှာသင် iPhone X အသစ်ကိုစျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့် ၀ ယ်နိုင်ပါသလဲ။